CheckFresh.com သည် အသုတ်ကုဒ်မှ ထုတ်လုပ်သည့်ရက်စွဲကို ဖတ်သည်။
အသုတ်ကုဒ်ကိုရှာနည်း လမ်းညွှန်ချက်များကိုကြည့်ရှုရန် အမှတ်တံဆိပ်တစ်ခုကို ရွေးချယ်ပါ။
🚗 သင့်တာယာသက်တမ်းဘယ်လောက်ရှိပြီလဲ သိချင်ရင် CheckTire.com ကိုသုံးပါ။
batch code ကိုဘယ်လိုရှာရမလဲ။ (ဥပမာများ)
လတ်ဆတ်တဲ့ အလှကုန်တွေကို ဘယ်လိုဝယ်ပြီး ကြာကြာထားမလဲ။
အလှကုန်များ၏ သက်တမ်းသည် ဖွင့်လှစ်ပြီးနောက် ကာလ နှင့် ထုတ်လုပ်သည့်ရက်စွဲပေါ်တွင် မူတည်ပါသည်။
ဖွင့်လှစ်ပြီးသည့်ကာလ (PAO)၊. ဓာတ်တိုးခြင်းနှင့် အဏုဇီဝဗေဒဆိုင်ရာအချက်များကြောင့် ဖွင့်လှစ်ပြီးနောက် သတ်မှတ်ထားသည့်အချိန်အတွင်း အလှကုန်အချို့ကို အသုံးပြုသင့်သည်။ ၎င်းတို့၏ထုပ်ပိုးမှုတွင် အဖွင့်အိုးပုံတစ်ပုံပါရှိပြီး အတွင်းတွင် လအရေအတွက်ကို ကိုယ်စားပြုသည့် နံပါတ်တစ်ခုပါရှိသည်။ ဤဥပမာတွင်၊ ၎င်းသည်ဖွင့်ပြီးနောက်6လကြာအသုံးပြုနိုင်သည်။
ထုတ်လုပ်မှုရက်စွဲ. အသုံးမပြုသော အလှကုန်များသည် လတ်ဆတ်မှု ဆုံးရှုံးပြီး ခြောက်သွေ့လာပါသည်။ EU ဥပဒေအရ၊ ထုတ်လုပ်သူသည် သက်တမ်း 30 လအောက်ရှိသော အလှကုန်များတွင်သာ သက်တမ်းကုန်ဆုံးရက်ကို ထားရှိရမည်ဖြစ်ပါသည်။ ထုတ်လုပ်သည့်နေ့မှစ၍ အသုံးပြုရန်အတွက် အသုံးအများဆုံးကာလများ-
အရက်နှင့်အတူရေမွှေး - ၅ နှစ်ခန့်
အသားအရေထိန်း အလှကုန် - အနည်းဆုံး ၃ နှစ်
မိတ်ကပ်အလှကုန် -3နှစ် (mascara) မှ5နှစ်ကျော် (အမှုန့်)
ထုတ်လုပ်သူပေါ်မူတည်ပြီး သိုလှောင်မှုသက်တမ်း ကွဲပြားနိုင်သည်။
မကြာသေးမီက check လုပ်ထားသုတ်ကုဒ်များ
11:51:44 Bourjois 1 တစ်နှစ်4လများ9နေ့ရက်များ 🇮🇷 အီရန်
11:51:42 Neutrogena2နှစ်များ3လများ3နေ့ရက်များ 🇹🇷 တူရကီနိုင်ငံ
11:51:33 CeraVe 8 လများ 21 နေ့ရက်များ 🇻🇳 ဗီယက်နမ်
11:51:18 Uriage5လများ 1 နေ့ 🇧🇬 ဘူလ်ဂေးရီးယား
11:51:14 Toni & Guy2နှစ်များ 11 လများ 19 နေ့ရက်များ 🇵🇰 ပါကစ္စတန်
11:51:09 Clinique2နှစ်များ 1 လ 21 နေ့ရက်များ 🇸🇬 စင်္ကာပူ
11:50:57 Eucerin 1 တစ်နှစ်4လများ4နေ့ရက်များ 🇭🇷 ခရိုအေးရှား
11:50:53 Creed6လများ 21 နေ့ရက်များ 🇬🇪 ဂျော်ဂျီယာနိုင်ငံ
11:50:47 Christian Dior9နှစ်များ 8 လများ 21 နေ့ရက်များ 🇦🇷 အာဂျင်တီးနား
11:50:47 Calvin Klein3လများ 11 နေ့ရက်များ 🇩🇪 ဂျာမနီ
သတ်မှတ်ချက်များ | ကိုယ်ရေးအချက်အလက်မူဝါဒ | ထုတ်ပြန်ချက်များ | Support | မင်းရဲ့တာယာသက်တမ်းက ဘယ်လောက်လဲ။
အခြားကုန်အမှတ်တံဆိပ်များအားလုံးသည် သက်ဆိုင်ရာပိုင်ရှင်များ၏ ပိုင်ဆိုင်မှုဖြစ်ပြီး ၎င်းတို့ကို သတင်းအချက်အလက်ဆိုင်ရာ ရည်ရွယ်ချက်အတွက်သာ တင်ပြခြင်းဖြစ်သည်။ မူပိုင်ခွင့်များရယူပြီး။